Saturday, 04.04.2020, 10:54pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 05.24.2017, 11:17am
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई
Wednesday, 05.24.2017, 11:16am
अघिल्लो आइतबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट हालसम्म छ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । कतिपयले पदभार समेत ग्रहण गरिसके । मुलुकको नयाँ संविधान अनुसार संघीय ढाँचामा बनेको स्थानीय तह एउटा सरकारकै रुपमा स्थापित हुनेछ । अहिले सबैको चासो र उत्सुकता यो सरकारले के गर्न सक्छ भन्नेतिर बढेको छ ।
Wednesday, 05.17.2017, 12:15pm
वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यतिबेला मतगणना जारी छ । आम जनताको चासो यसैमा केन्द्रित छ । २० वर्षपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचित संरचना अनुसार भएको निर्वाचनप्रति जनताले अपार साथ दिए । झण्डै ७३ प्रतिशत मत खसेको छ । मुलुक बाहिर रहेकाहरुको संख्या जोड्ने हो भने यो प्रतिशत अहिलेसम्मकै उच्च मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुले मतदान गर्न पाएनन् । २०६५ सालयता दशौं लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । मतदान स्थलहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । अर्कोतिर भर्खर बालिग भएका ठूलो संख्याका युवाहरुले मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् । जेजति मतदान भयो यसले जनताको चाहना स्पष्ट पारिदिएको छ । तीन प्रदेशमा भएको मतदानले बाँकी चार प्रदेशको निर्वाचनको पनि संकेत गरेको छ । अब तराईका जनता जेठ ३१ को व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
Wednesday, 05.17.2017, 12:10pm
२०५४ सालमा भएको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचन । यसबीचका समयसम्म स्थानीय निकायहरू सरकारी कर्मचारी र गाविस सचिवको भरमा चलेका थिए । एकपटक राजाबाट कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका वखत २०६२ माघ २६ मा स्थानीय चुनाव भए पनि सहभागिताका दृष्टिले सर्वमान्य हुनसकेन ।
Wednesday, 05.17.2017, 12:08pm
कसैले कल्पना गरेको थिएन होला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिनुहोला भनेर । तर, राजनीतिमा नहुने केही छैन । यस्तै भयो चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ लङ्कुस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गर्नुभयो ।
Thursday, 05.11.2017, 11:44am
मुलुक दुई दशको अन्तरमा हुन लागेको स्थानीय निकाय निर्वाचनले ढपक्क ढाकिएको छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशको निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै गर्दा यी क्षेत्रका आम मतदाताहरु उत्साहित छन् । आफ्नो गाउँ नगरको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाइने यो अवसरको उपयोग गर्न र आम मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न दलका उम्मेदवारहरु जवर्जस्त रुपमा प्रचारमा जुटिरहेका छन् । यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरुभन्दाा फरक ढंगले हुँदैछ । भड्किलो प्रचार शैलीलाई बन्द गरेर भद्र शैली अपनाइएको छ । विशेष गरी उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् । आम मतदाता पनि तिनै सञ्जालहरुबाट उम्मेदवार चयनमा रमिरहेका छन् । निर्वाचनमा प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि मूल प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने आँकलन गरिएको छ । हुन्छ–हुँदैनको दोधारमा रुल्मुलिएको निर्वाचनको पहिलो चरण भने सहजै रुपमा सम्पन्न हुनेमा अब कुनै शंका छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन भने अझै धर्मरमा छ ।
Thursday, 05.11.2017, 11:43am
प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई दशकको अन्तरालमा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते हुँदैछ । जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ?
Thursday, 05.11.2017, 11:42am
काठमाडौं । सत्तापक्षका केही नेताको स्वार्थ विपरीतको निर्णय गरेको आक्रोशमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतकोा अन्तरिम आदेशसंगै तुहिएको छ । अदालतले जेजस्तो आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो त्यो संविधानसम्मत नभएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि आइतबारदेखि उहाँ सर्वोच्च जानुभयो । यो मुद्दाले सरकारलाई ठूलो नैतिक संकटमा धकेलेको छ ।
Tuesday, 05.02.2017, 02:05pm
ई दशकपछि बल्लबल्ल हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित तिथि जति जति नजिक आइरहेको छ उति उति असंगत प्रकृतिका विष्मयकारी घटनाको बाढी आउन थालेको छ । हुँदादुँदा राजनीतिक अनैतिकताको चरम रुप प्रदर्शित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लोकतान्त्रिक अवधारणामाथि नै चोटिलो प्रहार गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दत्ता भएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध पनि भताभुङ्ग पार्ने र न्यायिक निष्पक्षताको घाँटी निमोठेर न्यायपालिकालाई पनि सरकारकै आदेशपालक अङ्ग बनाउने खेलको प्रयोग पनि यसै समयमा भएको छ । यो प्रकरणप्रति असहमति जनाउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजिनामा दिइसक्नु भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम
Tuesday, 05.02.2017, 02:04pm
काठमाडौं । लामो समयदेखिख थाँती रहेको नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतले तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ?
सत्तापक्षले एकाएक प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक बिधिको खिल्ली उडाएको छ । महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला सभामुख भएको मुलुक भनेर विश्वका नेताहरुले नेपालको उदाहरण दिएर यस्तो हुनुपर्छ प्रतिनिधित्व भन्दै गरेका बखत अनि भ्रष्टाचारीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै सजायँ तोक्दैगर्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नु विडम्बना नै हो ।
Tuesday, 04.18.2017, 11:31am
काठमाडौं । देशको मौसममा छिनछिनमा भएको बदली जस्तै राजनीति पनि बदलिंदै कतिबेला के हुने हो पत्तो पाउनै नसकिने भएको छ । कसको कस्तो स्वार्थले कतिबेला काम गर्छ र हुँदाहुँदैको काम बिग्रन्छ त्यो पनि भन्न सकिन्छ ।
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ?
Tuesday, 04.18.2017, 11:29am
काठमाडौं । मधेशी मोर्चाको सहमतिमा सरकारले संविधान संशोधनको पहिलेको पस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरे पनि उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याए निर्वाचनमा भाग लिने उनीहरुको पूर्व घोषणा मित्थ्या सावित भएको छ ।
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ?
Tuesday, 04.11.2017, 04:06pm
मधेशी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ । यो प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा पनि सहमत भएको र यही अनुसार संविधान संशोधन भए उनीहरूले चुनावमा भाग लिने बताएका छन् । तर, यो प्रस्ताव पनि पारित हुने सम्भावना भने निकै कम छ ।
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ?
निर्वाचनको पक्षमा राष्ट्रिय जनमत तयार
काठमाडौं । गाउँपालिका र नगरपालिकाको घोषित निर्वाचनको तिथि जति जति नजिकिँदै छ देशव्यापी रूपमा राजनीतिक सरगर्मी पनि उत्तिकै बढ्दैगएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकातिर उम्मेदवार चयनको आन्तरिक कसरतमा लागेका छन् भने आकर्षित घोषणापत्र तयार गर्न पनि उत्तिकै तयारीमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू देशका बिभिन्न भागमा पुगेर कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्रिय रहेका छन् । हरेक क्षेत्रका उम्मेदवार हुन चाहनेहरूको लर्को लागेको छ । संसदभित्र रहेका २७ दल र बाहिर रहेका ८६ दलहरू सबै निर्वाचनमा आआफ्नो हैसियत कायम गर्ने रणनीतिक अभियानमा जुटेका छन् । संसदभित्रका २७ दलले देशव्यापी रुपमा एउटै निर्वाचन चिन्ह पाएका छन् भने बाहिरका ८६ दललाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र हैसियतमा बेग्लाबेग्लै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेकाले दलीय चुनाव चिन्हका लागि संघर्षरत छन् ।
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो
Tuesday, 04.11.2017, 04:05pm
मुलुकभर वैशाख ३१ गते हुन निर्वाचनको माहोल तात्दै जानथालेको छ । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नयाँ पुस्ताका युवाहरूको ठूलो चासो छ । उनीहरू दलीयभन्दा विकास निर्माणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवारहरूको चयनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । युवाहरूमा निर्वाचनको वेग्लै जोश छ ।
Wednesday, 03.22.2017, 02:49pm
बैशाख ३१ गते मिति तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिन निर्वाचन आयोग नै षडयन्त्रमा लागेको आशंका सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले प्रकट गर्नथालेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले हालै पत्रकार सम्मेलन गरी एकातिर दलीय राजनीतिक सहमतिविना निर्वाचन हुन नसक्ने सन्देश प्रवाह गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको भाषा बोल्नु र अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र’ हटाएर नयाँ खिचलो खडा गरी आन्दोलनमा होमिन उन्मुख गराउनुलाई ‘निर्वाचन हुन नदिने’ षडयन्त्रको उपजका रुपमा दलीय नेताहरूले लिन थालेका छन् ।
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका
Wednesday, 03.22.2017, 02:48pm
कञ्चनपुरका गोेविन्द गौतमको हत्यापछि भारतले दशकअघि तयार भएको विवादास्पद नक्सामा हस्ताक्षर गर्न दवाव दियो । भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि समक्ष भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले कञ्चनपुरमा भएको गोलीकाण्डलाई आधार बनाएर त्यस्ता घटना नदोहोर्याउन यसअघि नै तयार भएको नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारत नेपालमा के गरेर के चाहन्छ भन्ने अरु प्रष्ट भएको छ ।
Wednesday, 03.22.2017, 02:47pm
» सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ?
» राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का
» मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए
» देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान
» प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा
» पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत
» थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल
» भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा
» संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन
» नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति
» निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत
» देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख
» पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा
» शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप...
» नेपाल नै नबच्ने चिन्ता
» मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध
» एकता दिवस मनाउनु आवश्यक
» “मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो”
» सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश
» राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला